Ho antsika Frère d'Arme
mercredi, 30 septembre 2020 13:10
Tsy fanaoko ny mitondra kiana ampahabemaso ho antsika miaramila ao anaty Foloalindahy, mahatsiaro ho rahalahy afaka manoro hevitra na izany aza satria iombonana ny fototra niaviana sy hijoroana.
Maro ireo ezaka ataonareo Zandry sy Zoky ankehitriny eo anivon'ny Tafika, Miaramila, Zandary ary Polisy. Anisan'ny ezaka goavana ary misy fandrosoana ny fametrahana ho matihanina ny asa fiarovana eo anivon'ny Foloalindahy, ary miroso amin'ny fanavaozana sy fametrahana ireo rafitra mifandraika amin'ny tanjona tiana ho tratra.
Ny tiako iahaviana dia ny fanamafisana ny fitondran-tena, ny fitsipi-pifehezana ara-miaramila, ny tsy fiarovana izay mania nefa efa nahitsy tamin'ny lalana ratsy nataony.
Ohatra amin'izany, efa tonga ny Lehibe, ny Praiminisitra raha eto amin'ny sary, misafo ny andian-tafika, ny Faneva efa mihatrana, nefa mbola misamaritaka ireo manam-boninahitra aoriana, mbola misy ny mampiasa phone sy manondro izay fandaminana.
Lehibe misafo andian-tafika eo ambany Faneva iadidiany izy, nefa dia mbola misy garde corps mialoha làlana sy manaraka azy avy ao aoriana ihany. Toa mampiseho hoe tsy matoky ireo Tafika eo ambany Faneva ve izy, no misy mpiaro manokana misafo eo anoloany ary manakatona aoriana? Ka raha ianao Lehibe aza tsy matoky ny Miaramila eo ambany fiadidianao, ka ny vahoaka ho arovana ve hatoky azy ireo?
Tsy sambany ny fihetsika toy izao, ka izay no nampiloa-bava aho, fa ny fitiavana hanana ny tsara sy hanohizanareo Zandry sy Zoky, frère d'Arme, ny andraikitra lehibe nankinina taminareo hatrany no manentana ahy.
Ny Miaramila no endriky ny Firenena iray, organisation, discipline, harmonie.
Tsy adino ny tenin'ny Zoky frère d'Arme iray "Na mandeha mamany aza ialahy dia mihera amiko aloha, vao miala an-daharana".
Ho an'ny Tanindrazana.